Isiphuthukezi kwi-Brazil (Isijapani version) - Brazil Ividiyo Incoko - Bate-Papo!
Isiphuthukezi kwi-Brazil (Isijapani version)
Ubukhoboka waba prohibited ngumthetho
Epreli wonyaka, isiphuthukezi Pedro Alvarez Corporal kuqala landed kwi Isijapani coast waza wathabatha ulawulo kubo
Ngezantsi ozayo ye-Spaniards kwaye isifrentshi, ukumkani wama-Germany munchies, kuqalwa nyaka crossed i-colonization lizwe.
I-indigenous abantu behlabathi - Indians bafa idabi, kwaye ukususela infectious izifo, yintsimi ngamakhoboka okanye banyanzeleka baphuma kulo ilizwe. Nyaka kuba sebenza plantations, apho cotton bebe grown kwaye sugar cane aphesheya ngamakhoboka-Negroes. Kwi-Brazil kwenzeka ukuzimela ukusuka Niger kwaye waba elizimeleyo Empire. Kwaye kwi-Brazil, i-segolide ukuba zikho a monarchical ifomu karhulumente.
iminyaka, Brazil waba Federal Kwiriphabliki.
Okwangoku, liquka amabini anesithandathu States kwaye Federal (imali) kwisithili. Brazil ingaba anesihlanu lizwe likhulu ehlabathini, occupying i ariya km kwaye averaging (nokuhlola konyaka) abahlali. I-bonke ka-Brazil. blacks, Indians kwaye Asians. Indian s bonke mixed nge-old ishishini kuqala yi-isiphuthukezi, kwaye kwangoko blacks kwaye abameli kwezinye Izizwe, abaya kuba ezintlanu centuries kuba ifike kwi-Brazil. Isingesi ulwimi Brazil Niger sele abanye neeyantlukwano kwi-upelo, ubizo, uqaqambiso kwaye sigama, eziya wachaza, kwesinye isandla, bekhamera remoteness, kwaye kwesinye isandla, ezithile zilandelayo: eyakhiwe ngayo Isijapani abantu behlabathi. Ngoko ke, ulwimi enkulu amaqela indigenous Tupi-Guarani eliwaka amazwi sele idlule kwi-Isijapani isiphuthukezi ulwimi.
Ngokungqinelana nomgaqo-Siseko yamkelwa
Kuqala kwaye foremost, oku kwenziwa ukuba amazwi denoting amagama abantu, iindawo, ethile imithi, izityalo, izilwanyana, iinjongo, lokutya kunye nezifo. Efanayo iindlela baba kanjalo borrowed amazwi ukusuka ulwimi Afrika Negroes wazisa ukuba Brazil. Linguistic scholars bakholelwa ukuba kwi-isingesi ulwimi-Brazil, kukho ezinye lwesivakalisi, kwaye ubizo: imigaqo okokuba baba ngaphambili isetyenziswa ngendlela efanayo njengoko kwi-Germany kwaye kwi-Brazil.
Noko ke, phezu ixesha kokuba ifumene kwi-Germany ngenye indlela uphuhliso.
Kwesinye isandla, Isijapani romanticcomment uluncwadi waba aqwalasela aspiration versus conservative landela isiphuthukezi isijamani imithetho zibhengezwe a mixture ka-nomthetho ondilisekileyo (ephezulu) uhlobo kwi-ulwimi, iifomu ezahlukeneyo ka-kuthethwa ulwimi kwaye yenza ingxenye yesakhelo somgaqo-national ulwimi kuzo zonke iingingqi ka-Brazil. Century Isijapani writers wafuna ukunqanda ezibalulekileyo neeyantlukwano phakathi kuncwadi kwaye athethe ulwimi.
Kwi-uluncwadi kwaye intetho onke amacandelo ye-Isijapani bonke ingaba ukusetyenziswa, yi Prime umzekelo non-ukuthotyelwa kwemithetho kunye kuncwadi norms ye-isingesi ulwimi kwi-Germany.
Kwi-kuthethwa ulwimi endaweni unyango yindlela esetyenziswa rhoqo ukuba kubalulekile ngoko nangoko yalandelwa a nefani okanye igama. Apho sele kuba kakhulu ngokufanayo kwi-Germany, ukwakhiwa kunye preposition kwaye infinitive, kwaye asiyiyo lohlobo ka-Brazil. Endaweni yoko, baye ikakhulu kusetyenziswa i-gerund. Ngokungafaniyo ne - isiphuthukezi kwi-Brazil, i-ezithile inqaku iqhele ayisetyenziswa phambi possessive pronouns phambi nouns phambi kokuba amagama zisetyenziswa kunye designation ka-indawo kwaye budlelwane. Kwi-Brazil, i-uqiniseko inqaku ngu engaqukwanga kwi-intetho kaninzi kwe kwi-Germany. Ephikisana isiphuthukezi tradition (bona isifundo), unyango kwi-Brazil kubaluleke kakhulu esenziwe lula. Respectful unyango ngu limited amazwi ngomhla okanye, kwaye kanjalo ngokuchasene young unmarried abafazi.
Njengoko"ndibhala le leta"unyango isetyenziselwa, apho corresponds ukuba Isijapani pronoun kuwe.
Emzantsi Afrika ka-Brazil, njengoko enjalo unyango ngu iifayile kusetyenziswa pronoun. Ngokungafaniyo ne - isiphuthukezi kwi-Brazil, i-esemthethweni kwaye honorary amagama eencwadi, njengokuba umthetho, akunjalo, kusetyenziswa. Nangona yokuba wonke graduate ingaba iwonga doctor kwi-Brazil oku isihloko ayikho onikiweyo enjalo elikhulu loluntu xabiso, njengoko kwi-Germany. Ootitshala isibheno amazwi, okanye kungakhathaliseki nokuba baya kusebenza kuyo isikolo, gymnasium, Ekholejini okanye Ngezifundo, nokuba wafundisa pupils okanye abafundi. I-ukusetyenziswa abanye prepositions kwi-yelenqe kunye ezithile verbs kwi-Brazil, kwezinye iimeko, differs ukusuka zabo sebenzisa kwi-Germany. Abanye oluzinzileyo prepositional afihlakeleyo, lohlobo kuba Portugal, ayikho kwi-Brazil usekela kamongameli kwelinye icala. Apha asisayi cite imizekelo nganye kunjalo, ngaphandle kokuba kuthi apho kwi-Brazil kunye isenzi denoting a deliberate yokuhamba-hamba, uya kusetyenziswa i-kwesizathu kwi-Germany ingaba kusetyenziswa i-pretext okanye (bona isifundo). Kwi-Isijapani grammars ka-isingesi ulwimi endaweni personal pronouns kwi-isivakalisi kulandela imigaqo olwamkelekileyo kwi-Germany. Nangona kunjalo, athethe ulwimi kwi-Brazil, kukho ezinye departures ukusuka imigaqo. Phakathi kwabo kukho zilandelayo: ngokubambisana kunye ezimbini verbs apho omnye isetyenziselwa kwi-infinitive ifomu, Portugal, personal injongo pronoun unako ukunxulumana usebenzisa hyphen njengoko kunye infinitive, isenzi spraguei. Kwi-Brazil, i-ngo umahluko, personal pronoun in iimeko ezinjalo phantse rhoqo kumi phambi infinitive kwaye kwathiwa ngaphandle hyphen. Fused pronominal iifomu, njalo-njalo. (bona isifundo: personal pronouns), nangona babe kukho inqaku lencwadi kwi-Isijapani grammars, Brazil, zisetyenziswa kakhulu kuyanqaphazekaarely kunye ngembalelwano kwaye ukuthetha. Ukusetyenziswa personal pronouns kwi-ayisebenzi ngendlela umsebenzi ngqo okanye ngqo additions ukuba Isijapani imithetho isijamani sibonwa ezingachanekanga, nangona kunjalo kwi-kuthethwa ulwimi kwi-Brazil, i-eli sebenzisa kakhulu ngokufanayo (umzekelo, endaweni - ndabona kuye).
fumana i-Latin Incoko Live
ਡੇਟਿੰਗ ਕਾਤਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: - ਇੱਕ
free Chatroulette ividiyo ukuncokola nge-girls- ubudala free iwebhusayithi ividiyo Dating-intanethi ukuphila umsinga girls abafazi ividiyo ividiyo Russian Dating ividiyo intshayelelo esisicwangciso-mibuzo ividiyo-intanethi kuba free ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko kunye ubhaliso apho kuhlangana a kubekho inkqubela